နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကို တစ်ခါမှမရှုံးဖူးသေးတဲ့ အီတလီ
ယူရို-၂၀၂၀ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲတွေကို ဒီနေ့မှာ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာစံတော်ချိန် စနေမနက်(၁:၃၀)အချိန်ကျရင် နာမည်ကျော်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့အီတလီအသင်းတို့ရဲ့ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သင်းစလုံးက အခုပြိုင်ပွဲမှာဗိုလ်စွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့အပြင် ရလဒ်ကောင်းတွေရယူပြီး အခုအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တစ်ကြိမ်သာဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အီတလီအသင်းဟာ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်အထိ တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ပြင်သစ်၊ စပိန်တို့ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ဒုတိယနေရာတွေနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ နည်းပြမန်စီနီရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ခြေစွမ်းရော ရလဒ်ပိုင်းပါကောင်းမွန်နေတဲ့ အီတလီအသင်းဟာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် (၁၂)ပွဲဆက်နိုင်ပွဲစံချိန်၊ ပြိုင်ပွဲစုံ(၃၁)ပွဲဆက်စံချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁)အသင်းဖြစ်တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဟာ ယူရိုပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်းမှာတော့ အားရစရာမကောင်းသေးဘဲ ၁၉၇၂ မှာ တတိယ၊ ၁၉၈၀ ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဒုတိယနေရာတွေသာ အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့ပြီး ယူရို-၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်း ကွာတားဖိုင်နယ်ကနေ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ပေါ်တူဂီကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းက အသင်းရဲ့အဓိက,ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဟာဇက်၊ ဒီဘရိုင်းနားတို့ ဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့် ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာမယ့်အပြင် သမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာတွေအရလည်း ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက အီတလီကို မယှဉ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အီတလီအသင်းဟာ အဓိကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ စုစုပေါင်း(၄)ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ပွဲတိုင်းမှာရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ အီတလီနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့တာက ၁၉၅၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်မှာဖြစ်ပြီး အီတလီအသင်းက (၄-၁)ဂိုးရလဒ်နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ယူရို-၁၉၈၀ အုပ်စုအဆင့်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့တော့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပြီး ယူရို-၂၀၀၀ နဲ့ ယူရို-၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အီတလီအသင်းက (၂-ဝ)ဂိုးရလဒ်တွေနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။
သမိုင်းတစ်လျှောက် ဒီနှစ်သင်းဆုံတွေ့မှုမှတ်တမ်းမှာလည်း အီတလီအသင်းကပဲ အသာရထားသလို (၁၄)ပွဲနိုင်၊ (၄)ပွဲသရေ၊ (၄)ပွဲသာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အီတလီအသင်းဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ပေါ်တူဂီနဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးကတည်းက အခုအချိန်အထိ ရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ချန်ပီယံဟောင်း အီတလီအသင်း နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကို တစ်ခါမှမရှုံးဖူးသေးတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆက်ထိန်းနိုင်မလား?
ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လ်ဂျီယံကပဲ အီတလီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်နိုင်မလားဆိုတာ ဒီညပွဲမှာ အဖြေတစ်ခုထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် . . .
ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကို တစ္ခါမွမရႈံးဖူးေသးတဲ့ အီတလီ
မော်ရင်ဟို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ယူရိုပွဲ ကွာတားဖိုင်နယ်လေးပွဲမှာ အနိုင်ရမယ့် အသင်းများ